सरकारी एजेन्सीले यसरी गर्‍यो मतगणनामा भोट संख्याको हिनामिना – MySansar
सरकारी एजेन्सीले यसरी गर्‍यो मतगणनामा भोट संख्याको हिनामिना
Posted on May 28, 2017 May 29, 2017 by Salokya
पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदान भएको १४ दिनपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भयो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतले घोषणा गरे काठमाडौँ महानगरको कुल मतदाता संख्या दुई लाख ७९ हजार ३०६ रहेकोमा एक लाख ९७ हजार २२७ मत खसेको थियो। तर सरकारी समाचार एजेन्सी रासस यति हचुवा हुन गयो कि अस्ति १० घण्टामा काठमाडौँ महानगरपालिकामा खसेको भोटको संख्या एक्कासी १७ हजार ३१७ वटा बढाइदियो। तर उसले केही दिनदेखि ठोकुवा गर्दै आएको खसेको मतको संख्या आज सार्वजनिक भएको वास्तविक खसेको मत संख्याभन्दा साढे २४ हजारले बढी रहेछ।
यो शुक्रबार बिहान १० बजेर ८ मिनेटमा राससले दिएको समाचार हो। यो समाचारमा १ लाख ७२ हजार ६८३ भोट खसेको भनिएको छ। अनि एक लाख ६७ हजार १४१ भोट गनिसकेको पनि भनिएको छ। अर्थात् पाँच हजारभन्दा कम भोट गन्न बाँकी। तर शुक्रबार दिनभर त के शनिबार दिनभर र रातभर पनि काठमाडौँको अन्तिम मत परिणाम आएन।
अब हेर्नुस् त्यही राससले राति साढे ८ बजे दिएको समाचारमा भने महानगरपालिकामा १ लाख ९० हजार मत खसेको भनेर लेखेको छ। बिहान १० बजे १ लाख ७२ हजार ६८३ भोट खसेको भन्ने अनि १० घण्टामै १७ हजार ३१७ वटा भोट बढ्ने? यस्तो कसरी हुन्छ? तर भयो। न राससले माफी माग्यो, न स्पष्टीकरण नै दियो।
रातिको समाचारमा १ लाख ७५ हजार ७२२ मतगणना भइसकेको भनिएको थियो। बिहान भने खसेको भोट नै १ लाख ७२ हजार ६८३ मात्र भनिएको थियो। खसेको भन्दा बढी मत गनेको समाचार लेख्दा पनि भूल सुधार गर्नुपर्ने महसूस भएन सरकारी समाचार एजेन्सी राससलाई !
एकचोटी मात्र त्यसो लेखेको भए पो, जेठ ११ मा पनि राससले लेखेको समाचारमा खसेको भोट १ लाख ७२ हजार ६८३ भनेर किटानै गरेको थियो-
तर निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको दिन भने लाजै नमानी कूल खसेको मत संख्या यस्तो लेखिएको छ। यसो गर्दा पुरानो तथ्याङ्क गलत भएको उल्लेखसमेत गरिएको छैन।